MasterCard's CFO: Cryptocurrency ịzụrụ na-boosting anyị ahịa emefu - Blockchain News
MasterCard hụrụ na-abawanye na ojiji nwere obere n'ihi ọrụ ịzụta cryptocurrency.
Ugwo netwọk si cross-ókè-ala mpịakọta – a ọtụtụ nke ndị ahịa na emefu ná mba ọzọ – nwere bilitere 22 percent dị afọ a, ịkpatawo nwere obere site ahịa iji ha kaadị ịzụta digital ego, kwuru Chief Financial Officer Martina Hund-Mejean on Thursday. Higher na emefu na njem na Europe na-enwe, o kwuru.
"Dị nnọọ ka o doo anya, anyị adịghị ịgbanwee ma ọ bụ dozie cryptocurrency azụmahịa anyị na netwọk,"Hund-Mejean kwuru na a na oku na nnyocha. "Anyị atụmatụ echela ụdị ọrụ ga-anọgide na dị ka anyị na-enweghị akara nke anya dị ka otú cardholders ga ele cryptocurrencies n'ọdịnihu."
Omume ndị kasị mkpa nke 2017 na kaadị Community
Bitcoin nkọ ...
Mkpụrụ ego igwekota
Olee Cryptocurrency M ...
The Blockchain-Constrium R3 emepụta ihe izi center maka ọkàiwu.
ụnyaahụ, on Februa ...
Previous Post:Mkpụrụ nke ASIC ibe site Samsung
Next Post:Gbasie faịlụ patent ịnabata Bitcoin maka igbe